Godinoota Shaggar Hunda Keessatti Har’a Amajjii 8/2016 FXG Itti Fufee Jira.‏ | QEERROO
Godinoota Shaggar Hunda Keessatti Har’a Amajjii 8/2016 FXG Itti Fufee Jira.‏
Posted on January 8, 2016 by Qeerroo
Oromiyaa guututti FXG Amajii 1,2016 irraa kaasee baadiyaa fi magaalaa, dhaabbata barnootaa fi amantaallee dabalachuun itti fufeera.
Haaluma kanaan har’a Amajii 8,2016 FXG Shaggar godina 4nuutti itti fufee jira.
1. Shaggar kabaatti aanaa Jaarsoo Tulluutti ganama obboroo uummanni bahee daandii cufee jira. poolisootni fi waraanni FXG kana ugguruuf ergaman irratti uummanni d agaadhan bahee magaala keessaa baasee jira. Sulultaa, Salaalee, Gabra Gurraachaa, Kuyyuu fi kkf keessatti FXG
adeemaa jiru hojjetaa mootummaa hirmaachisee, shamarran addatti qabsoo kana keessatti qooda olaanaa fudhachuudhaan gaggeessaa jiru, qonnaan bulaan waan qabuun ka’ee jira. barataan mana barumsaatti wal gahuudhaan FXG qabsiifame hamma galiisaatti kunoo hin dhaabbanne itti fufee akka jiru caasaan godina shawaa kaabaa gabaasani jiru
2. Shaggar lixaatti-kaleessa ayyaana tapha Qilleen wal qabatee uummanni Amboo fi barattootni yuuniversitii irraas bahanii dirreetti bahaniin
FXG gaggeeffame. Kanumaan korri bittinneessaa fincila kana dura dhaabbachuuf kaleessa Amajii 7/2016 guyyaa keessaa uummata bittimsuuf
yoo deemu uummanni fi dargaggoooni dhagaadhaan humnoota waraanaa achi deeman reebuun yeroo ammaa kana poolisiin fi korri bittinneessaan
reebicha uumataan miidhamee babbaqaqee hospitaala seenee akka jiru Qeeroon gabaasee jira. Osoo wal irraa hin cinneen har’as FXG shawaa
lixaa aanaalee maratti gaggeeffamaa jira.
3. Shaggar bahaa-aana Fantalleetti sa’a kana FXG uummataan gaggeeffamaa jira. tajaajiltootni geejibaa hojii dhaabuun gara FXGtti makamanii
jiru. Hojjetaan mootummas hojii dhaabuun har’a uummata waliin hiriiree jira. Daandiin konkolaataa amma akka cufamee jiru Qeerron gabaasee
jira. kaabinoonni wayyaanee fi poolisoonni uummata dura dhaabbatuun uummata irratti dhukaasa banaa jiru.
– Wayyaanen shororkeessaadha
– Oromiyaan ni bilisoomti
– Ni walaboofna
– Ni bilisoomna
– Abbaay Tshay bineensa nama nyaatuudha
– Gibra hin kaffallu, wayyaanee hin gabbarru
– Ofiin of bulchina
– Sirna mootummaa abbaa irree wayyaanee ni diigna Dhadannoo har’a Fantalleetti jedhamaa oole tahuu Qeerroon gabaasee jira. Itti fufa
4. Shaggar kibbaa lixaatti manneen barnootaa guutummaan guututti cufameera. Daandiin konkolataas yeroo ammaa kanatti cufamanii
argaman. Aanaalee garagaraa godina shawaa kibba lixaa keessatti sirni Wayyaanee dhabamsiifamee ofiin of bulchuun yeroo itti gaggeeffamaa
jiruudha. FXG oromiyaa wal gahuudhaan kan iti fufuudha.
6. Ammajjii 8,2015 warraaqsii Fincila xummura Gabrummaa Godina Kaaba Shaggar(Godina Salaalee) Aanaa Warraa Jaarsootti jabaachuun Itti fufe, Ganama irraa Eegaluun daandiin Konkolaataa bakkoota hidduutti cufamaa jira, Waraanni Wayyaanee uummataa gooluuf fiigaa jiruu daandii cufamee banuuf hedduu rakkachaa jiraachuu Maddeen Qeerrooo Bilisummaa Oromoo Tulluu Milkii gabaasan.
1 thought on “Godinoota Shaggar Hunda Keessatti Har’a Amajjii 8/2016 FXG Itti Fufee Jira.‏”